– आभाष अधिकारी
के गर्ने  ?
काम कस्तो हुन्छ  ?
माइक्रोवर्कस सामान्यतया साधारण अर्थात् कम्प्युटर तथा इन्टरनेट चलाउन जान्नेहरूले गर्न सक्ने काम नै हुन्छन् ।
के नगर्ने  ?
पैसा कसरी प्राप्त गर्ने  ?
नेपालीको स्थिति :
– कान्तिपुर साप्ताहिक
के हो ओमीक्रोन भेरिएनट ? कसरी फैलीदैछ बिश्वभर सम्पूर्ण जानकारी सहितको रिपोर्ट
थोरै लामो तर महत्वपूर्ण भनाइ र अपडेट:
शिक्षण पेसा सगै गाइपाल गर्दै भुबन धामी लाखौ आम्दानी प्राबिधिक र अनुदान बारे कृषि जानकारी